ज्योति मगरको झोला खोतल्दा भेटिए यस्ता चिज (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
ज्योति मगरको झोला खोतल्दा भेटिए यस्ता चिज (भिडियो)
काठमाडौँ। छोटा पहिरन, गोप्य अङ्ग देखाउनमा कन्जुस्याइँ नगर्ने, खुला विचार, मस्ती र मनोरञ्जन प्रस्तुत गर्न जानेकी कलाकार भनियो भने ज्योति मगरको हकमा खास फरक पर्दैन । दुई अर्थ लाग्ने गीत संगीतदेखि अनेक स्टन्टबाजीले ज्योति चर्चामै हुन्छिन् ।
उचाइ , रूप, फिगरको हिसाबले ज्योति कुनै मोडल जस्ती लाग्दिनन् । तर हुन्छ उनकै चर्चा । मोडलका रुपमा ज्योति खोज्नेहरू पनि धेरै छन् । गायन त उनको महत्वपूर्ण अंश भइ नै हाल्यो । हेर्नुस् उनै चर्चित गायिका ज्योति मगरको झोलामा के होला।